Halloween any Italia | Fitsangatsanganana tanteraka
Halloween any Italia
Ny roa amin'ireo daty manan-danja indrindra voalaza ao amin'ny kalandrie italianina dia ny Andro All Saints (fantatra koa amin'ny hoe Tutti i Santi) izay ankalazaina amin'ny 1 Novambra sy ny Andro an'ny Maty (Il Giorno dei Morti), izay atao ny 2 Novambra. Fetibe roa misy endrika ara-pinoana sy ara-pianakaviana ity izay fihaonan'ny mpikambana ao aminy hahatsiarovana ireo izay tsy eo intsony. ary manaja ireo natokan'Andriamanitra.
Ireo fety roa ireo dia ankalazaina any amin'ny firenena manana fomban-drazana Kristiana fa amin'ny fomba samihafa. Any amin'ny firenena Anglo-Saxon dia ankalazaina ny Halloween raha any amin'ny firenena manana lova katolika kosa dia ankalazaina amin'ny Andron'ny Olomasina sy Andron'ny Fanahy rehetra. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hodinihintsika ity fanontaniana ity sy ny fomba hankalazana ny Halloween any Italia.
1 Ahoana ny fomba ankalazana ny Andro masina rehetra any Italia?
2 Ahoana no hankalazana ny Andron'ny fanahy rehetra any Italia?
3 Ary amin'ny faritra italianina sasany?
4 Inona no atao hoe Halloween?
4.1 Ahoana ny fomba ankalazana ny Halloween ankehitriny?
4.2 Fantatrao ve ny hafetsena na ny fikarakarana ny Halloween?
5 Ary ahoana no hankalazana ny Halloween any Italia?
Ahoana ny fomba ankalazana ny Andro masina rehetra any Italia?
Ny andron'ny Tutti i Santi dia fialantsasatra hafa noho ny andron'i Il Giorno dei Morti. Amin'ny 1 Novambra, ireo voatahy na olomasina rehetra niaina tamim-pinoana tamin'ny fomba manokana na maty ho azy dia nankalazaina tamin'ny fomba miavaka ary izay, rehefa nandalo purgatory, dia nanamasina ny tenany ary efa miaina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra eo anatrehan'ny Andriamanitra.
Fahita any Italia sy any amin'ny firenena hafa manana fomban-drazana katolika ny mankalaza an'ity andro ity amin'ny fampiratiana ireo relik'ireo olomasina ao amin'ny fiangonana lehibe sy katedraly.
Ahoana no hankalazana ny Andron'ny fanahy rehetra any Italia?
Fetim-pirenena io. Ny mangiran-dratsy tamin'io andro io dia ankalazaina any am-piangonana ny fangatahana ho an'ny maty ary mandritra ny andro sisa dia manatrika fasana ny Italiana mba hitondra voninkazo. manaja ny havany efa nodimandry izy ireo, indrindra ny krysanthemoma, ary miambina ny fasan'ny malalany. Ity andro ity dia amin'ny 2 Novambra no tanjona ary hivavaka ho an'ireo izay efa maty mba hahatadidy ny fahatsiarovana azy ireo ary hangataka amin'Andriamanitra mba handray azy ireo eo anilany.
Amin'ny lafiny iray, Matetika ny italiana dia mahandro mofomamy miendrika tsaramaso antsoina hoe "ossa dei morti" na dia antsoina koa matetika hoe "mofon'ny maty". Eo foana izy amin'ny fivorian'ny fianakaviana mandritra ireo andro ireo satria inoana fa miverina amin'io andro io ny maty handray anjara amin'ny fanasana.
Ny fianakaviana nentim-paharazana dia manomana ny latabatra ary mandeha any am-piangonana hivavaka ho an'ireo izay lasa. Avela hisokatra ny varavarana hahafahan'ny fanahy miditra ao an-trano ary tsy misy mikasika ny sakafo mandra-piverin'ny fianakaviana avy any am-piangonana.
Ary amin'ny faritra italianina sasany?
Sicilia: Nandritra ny alin'ny Sainan'ny Olomasina ato amin'ity faritra ity dia inoana fa ny maty ao amin'ny fianakaviana dia maniry ny hamela fanomezana ho an'ny ankizy kely miaraka amin'ny voan'ny Martorana sy ny zava-mamy hafa.
Massa Carrara: Amin'ity faritany ity dia zaraina ho an'ny sahirana ny sakafo ary divay vera no atolotra azy ireo. Matetika ny ankizy dia manao rojo vita amin'ny tratra sy paoma nandrahoina.
Tendrombohitra Argentario: Amin'ity faritra ity dia fomban-drazana ny mametraka kiraro amin'ny fasan'ny maty satria noheverina fa amin'ny alin'ny 2 Novambra dia hiverina amin'ny tontolon'ny velona ny fanahin'izy ireo.
Ao amin'ny vondrom-piarahamonina atsimon'i Italia ny fanomezam-boninahitra dia omena ny maty araka ny fomban-drazana tatsinanana amin'ny fomba grika-Byzantine ary ny fankalazana dia atao ao anatin'ny herinandro alohan'ny fiatombohan'ny karemy.
Inona no atao hoe Halloween?
Araka ny nolazaiko tamin'ny andalana teo aloha, Ny Halloween dia ankalazaina any amin'ireo firenena manana lovantsofina Anglo-Saxon. Io fankalazana io dia miorim-paka ao amin'ny festival Celtic taloha antsoina hoe Samhain, izay nitranga tamin'ny faran'ny fahavaratra rehefa nifarana ny fijinjana ary nanomboka ny taona vaovao nifanindry tamin'ny solstice tamin'ny fararano.
Tamin'ny fotoana Inoana fa ny fanahin'ireo maty dia nandeha teny amin'ny velona tamin'ny alin'ny Halloween, 31 Oktobra. Noho io antony io dia fanaon'ny olona ny manao fombafomba sasany hifandraisana amin'ireo maty ary handrehitra labozia hahafahan'izy ireo mahita ny lalana mankany amin'ny tontolo hafa.
Androany, ny fety Halloween dia tsy mitovy amin'ny tany am-boalohany. Azo antoka fa efa imbetsaka ianao no nahita azy io tamin'ny sarimihetsika! Ankehitriny dia nesorina ny dikany hafahafa amin'ny Halloween manome lalana mankalaza fankalazana toetra filalaovana, izay ny tena tanjona dia ny hiala voly miaraka amin'ny namana.
Ahoana ny fomba ankalazana ny Halloween ankehitriny?
Ny ankamaroan'ny olona dia miakanjo fety any an-trano na mivoaka miaraka amin'ny sakaizany amin'ny toeram-pandihizana mba hahafinaritra amin'ny hetsika misy lohahevitra. Amin'izany lafiny izany, ny bara, kafe, disko sy karazana fivarotana hafa dia miezaka ny handravaka ny orinasa rehetra miaraka amin'ny lohahevitra mahazatra an'ny antoko.
Ny marika haingon'ity fomban-drazana ity dia i Jack-O'-Lantern, voatavo voasokitra amin'ny endriny ivelany miaraka amin'ny tarehy manjombona ary ny ao anatiny dia haidiny mba hametrahana labozia ao anatiny ary hanazava azy. Mahatsiravina ny vokany! Na izany aza, ampiasaina ihany koa ny haingo haingo hafa toy ny cobwebs, taolana, ramanavy, mpamosavy sns.
Fantatrao ve ny hafetsena na ny fikarakarana ny Halloween?
Ny ankizy koa tena mankafy Halloween. Toy ny olon-dehibe, Miakanjo mandehandeha manodidina ny trano ao amin'ny manodidina azy ireo izy ireo amin'ny maha vondrona iray mangataka ny mpiara-monina aminy hanome zava-mamy ho azy ireo amin'ny alàlan'ilay "fikafika na fitsaboana" malaza. Fa inona no ahitana azy?
Mora be! Rehefa mandondona eo am-baravaran'ny mpiara-monina aminao amin'ny Halloween ianao, dia manolo-kevitra hanaiky fika na hanao fifanarahana ny ankizy. Raha misafidy fitsaboana izy dia mahazo vatomamy ny ankizy fa raha mifidy fitsaboana ny mpiara-monina dia manao vazivazy kely na prank ny ankizy satria tsy manome zava-mamy ho azy ireo.
Ary ahoana no hankalazana ny Halloween any Italia?
Na eo aza ny maha festival an'i Anglo-Saxon azy dia niely betsaka nanerana an'i Italia izy io ary ankalazain'ny olon-dehibe indrindra fa tsy ny ankizy loatra, noho izany dia tena miavaka ny mahita azy ireo manao ilay "fikafika na fitsaboana" ao an-trano.
Ny ankamaroan'ny Italiana dia miakanjo mba handeha any amin'ny fety amin'ny klioba na any an-trano mba hahafinaritra amin'ny fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny namana, misotro zava-pisotro vitsivitsy ary mandihy mandra-maraina.
Any Italia, ny fivarotana dia voaravaka motifs haingon-trano mahazatra toy ny voatavo, monster, cobwebs, ramanavy, mpamosavy na matoatoa, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Halloween any Italia
Fivavahana any Angletera